Hal mar, Linus waxay siineysaa suulka NVIDIA suulka | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo sawir isaga oo suulka kor u qaadaya. Halkii ayaan ka helay sawir-gacmeedkan, iyo qabashadan dhabta ah.
Waa maxay waxaani? Taas NVIDIA hal mar (ugu dambeyntii) waxay lashaqeysaa nambarka qaar darawalada noveau. Kiiskan balastarro taxane ah si aad u siiso taageero bilow ah (oo aan wali si buuxda u shaqeyn) shirkadda Kepler ee fadhigeedu yahay GK20A GPU, taas oo ku imaan doonta Chips Tegra K1. Chips-yadaan 192-core-ka ah ayaa lagu dhawaaqay horaantii Janaayo waxayna isku dayi doonaan inay cunaan suuqa Android. Laga soo bilaabo Fuck You to Fuck Haa waxaa jira talaabo weyn.
Sikastaba, kudos Alexandre Courbot dusha sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Hal mar, Linus wuxuu siinayaa suulka NVIDIA suulka
Hambalyo Nvidia! Dhamaanteenba wax wanaagsan ayey noo tahay inaan maqalno wararkaas, waxaan rajeynayaa inaan heysano war badan oo wanaagsan laakiin AMD sidoo kale .. !!! Waxaan ku soconaa wadada (in kabadan) taageero hufan!
Si kastaba ha noqotee, NVIDIA ayaa hoos u dhacday sababo la xiriira cadaadis ka yimid Valve iyo SteamOS. Dhinaca wadayaasha bilaashka ah, waxaan rajeynayaa in NVIDIA ay sidoo kale taageerto moodellada kale ee kaararka fiidiyowga ah si ay ugu yaraan u helaan taageerada bulshada haddii aysan rabin inay la qabsadaan dayactirka qalabkaas. dib u dhac.
Jidka agtiisa, Steam Big Picture wuxuu ku shaqeeyaa si fudud Linux-ka marka loo eego Windows-ka. Sidaas oo ay tahay, waxaan rajaynayaa in horumariyayaashu ay cadaadis dheeri ah saari doonaan NVIDIA iyo ATI / AMD si ay u taageeraan wadayaasha bilaashka ah si ay u helaan isticmaaleyaal badan oo GNU / Linux ah.
Nope, waa mid kaliya oo loogu talagalay Android.
Waad saxantahay, hadaanay ahayn Android
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda, xawaaraha garaafka ee darawalada xiran ee Nvidia had iyo jeer wuu ka fiicnaa kuwii Nouveau.
Uma maleynayo inay aad u fogaadaan oo ay daneeyaan taxanaha 5, 6, ama 7.
Kaga roon tan laad in in .. kibir u gaar ah.
Wax uun baa ur sida heesta halkaan, halkii ay ka siidayn lahaayeen wadayaashooda waxay la shaqeeyaan kuwa bilaashka ah… ??
Waxaan si buuxda u hubaa in nvidia ay qarinayso waxoogaa sir ah oo sawiradeeda ah shaashadeeda, hadii kale warkaan waa mid aad ufiican oo run noqon kara ...
Waxaad ubaahantahay "Shaabad ansaxinta" Linus xD
Maareynta server OpenVZ (III)